भारतमा बढ्दो कोरोना संक्रमणको बाछिटा नेपाली सीमाका बस्तीमा – Health Post Nepal
भारतमा बढ्दो कोरोना संक्रमणको बाछिटा नेपाली सीमाका बस्तीमा
२०७७ वैशाख २९ गते १८:३७
प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितिको संख्या ५३ पुगेको छ। यो देशभरको लगभग एक तिहाई हो।
१२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५मा ६ जिल्लाभन्दा बढी जोखिममा रहने अनुमान गरिएको भए पनि अहिलेसम्म बाँके, नवलपरासी र कपिलवस्तु गरी तीन जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमित छन्।
ती सबै संक्रमित भारतबाट आएका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति हुन्। त्यसरी संक्रमित भेटिनेमा बाँकेमा २४, कपिलवस्तुमा २१ र रूपन्देहीमा ७ जना छन् । र वर्दियामा १ जनामा स‍ंक्रमण पुष्टि भएकाे छ।
भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै त्यहाँबाट नेपाल आएका नेपालीबाट संक्रमणको जोखिम बढेको छ।
भारतमा कोरोना भाइरसका कारण चौबिस घण्टामै ९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार २ सयबढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
भारतमा अहिलेसम्म ६७ हजार २ सय ५९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने २ हजार २ सय १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
बितेको २४ घण्टामा मात्रै भारतमा हजार २ सय १३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएको थियो भने ९७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
लकडाउनको सुरुको अवस्थामा आउनेमा संक्रमण पोजेटिभ नदेखिए पनि पछिल्लो पटक आउनेहरूमा संक्रमण देखिएको हो । केही दिनयता छिमेकी भारतमा संक्रमित संख्या ह्वात्तै बढेको हुँदा त्यसको असर भारतबाट नेपाल आउने नेपालीमा देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
कोरोना तंरग गाउँगाउँसम्म
नेपालमा सुरुको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिमात्र कोरोना संक्रमित देखिने गरेकामा अहिले भने भारतबाट आउने व्यक्तिमा धमाधम संक्रमण देखिन थालेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ ।
रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका पूर्णिहवा गाउँका युवा मुम्बईबाट आएका हुन् । त्यसैगरी कपिलवस्तुमा पहिलोपल्ट भेटिएका मायादेवी गाउँपालिकाका २ का युवा पनि दिल्लीबाट घर फर्किएका व्यक्ति हुन् । दोस्रोपल्ट भेटिएका थप ३ जना पनि उनीहरूसँगै फर्किएका थिए ।
सोमबार भेटिएका कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा ८ जना र बुद्धभूमि नगरपालिकामा २ जना कोरोना संक्रमित युवा पनि भारतबाट आएका हुन् । उनीहरू सबै क्वारेन्टाइनमा रहेका थिए ।
त्यसैगरी बाँकेको नेपालगन्जमा भेटिएका पहिलो संक्रमित ६० वर्षे व्यक्ति पनि भारत जाने आउने गरिरहेको बताइएको छ ।
कोरोना सतर्कतामा समुदाय सहयोगी
कोरोना संक्रमण सतर्कतामा समुदायले सहयोगी भूमिका खेलेको पाइएको छ । सीमा सुरक्षामा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई छलेर गाउँ प्रवेश गरेकालाई स्थानीयले क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । यसले संक्रमण रोक्नमा निकै सहयोग गरेको कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।
रूपन्देहीमा पहिलोपल्ट भेटिएका संक्रमित युवालाई गाउँलेकै सहयोगमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउँदा र क्वारेन्टाइन रहेका व्यक्तिको स्वाबको नमूना लिँदै गर्दा प्रदेश ५ मा संक्रमितको संख्या बढेर गएको छ । गएको तीन दिनभित्रमा भारतबाट नेपाल भित्रिएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या अत्यधिक छ ।
त्यसैगरी कपिलवस्तुमा पहिलोपल्ट भेटिएका दुई युवालाई पनि गाउँलेकै सूचनाका आधारमा मायादेवी गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो । कपिलवस्तुमा दोस्रो पटक फेला परेका तीनजना र आज भेटिएका १० जना संक्रमितलाई पनि स्थानीयकै सूचनाको आधारमा क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको थियो ।
गैडहवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरन्जीवी घिमिरेले गाउँलेकै सक्रियतामा भारतबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव भएको बताएका छन् । ‘गाउँहरूमा टोल विकास संस्था गठन भएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘टोलमा कोही नयाँ व्यक्ति आउनेबित्तिकै संस्थाले क्वारेन्टाइनमा लिएर आइहाल्छ ।’
तराईका क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आउने मात्रै !
प्रदेश ५ मा क्वारेन्टाइनमा रहेका धेरैजसो भारतबाट आएका व्यक्ति छन् । त्यसमा तराईका ६ जिल्लामा त्यसको मात्रा अझै बढी छ ।
तराईका ६ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बर्दियामा ९४४, कपिलवस्तुमा ८८१ र रूपन्देहीमा ६३३ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । यो क्रम दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । बाँकेमा ३६७, नवलपरासीमा २१९ र दाङमा १४४ जना छन्।
रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा रहेको तीनवटा क्वारेन्टाइनमा १३७ जनालाई राखिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार क्वारेन्टाइनमा रहेका सबै भारतमा रोजगार गरेर फर्किएकाहरू हुन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरन्जीवी घिमिरेले १३७ जनामध्ये ४० जनाको स्वाबको नमूना लिइएको बताए ।
रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाको तीन ठाउँमा रहेको क्वारेन्टाइनमा अहिले ७२ जना छन् । त्यसमध्ये २२ जनाको स्वाबको नमूना लिइएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक भाष्कर आत्रेयले जानकारी दिए । साता दिनदेखि भारतबाट लुकिछिपी गाउँ फर्किनेको संख्या बढिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रवनाराण चौधरीले बताउँछन् । ‘दैनिक रूपमा ७ देखि १५ जना थपिरहेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘चाप बढेपछि सबै वडामा क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ज्योतिप्रसाद दुबेले पालिकामा रहेका तीनवटा क्वारेन्टाइनमा ५२० व्यक्ति बसिरहेको जानकारी दिए । ती सबै भारतमा रोजगारी गरेर गाउँ फर्किनेहरू हुन् । त्यसमा ६२ जनाको स्वाबको नमूना लिइएकोमा ८ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको दुबेको भनाइ छ । भारतबाट घर फर्कनेको संख्या दैनिक रूपमा बढ्न थालेपछि क्वारेन्टाइन क्षमता बढाउन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ग्रिजेशकुमार पाण्डेले बताए ।
बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा रहेका १० वटा क्वारेन्टाइनमा ३८२ जना रहेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालराज तिमिल्सिनाका अनुसार तीमध्ये ४० जनाको मात्रै स्वाबको नमूना लिइएको छ । क्वारेन्टाइनमा रहनेमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट गाउँ फर्किनेहरू रहेका छन् । यसअघि भारतबाट फर्किनेलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएकोमा अवधि पूरा भएपछि उनीहरूलाई घर पठाइसकिएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आइतबार साँझसम्म ५ हजार ३ सय ५१ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । त्यसमध्ये २११ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ भने ४४८ जनाको स्वाबको नमूना लिइएको छ । अधिकांसको शनिबार र आइतबार मात्रै स्वाबको नमूना लिइएको हो । आइतबार लिइएका सबै स्वाबको रिपोर्ट अझै आइपुगेको छैन ।
भारतले गरेन सहमति कार्यान्वयन
लकडाउनका कारण सीमानाका बन्द गर्दा भारतीय क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भारतीय पक्ष र नेपालमा अलपत्र पर्ने भारतीयलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो ।
लकडाउनले कामविहीन भएर घर जान निस्केका नागरिकलाई जुन देशमा छन्, त्यही देशको क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको थियो । तर अहिले भारतीय पक्षले सो सहमति पालना गरेको छैन ।
कामविहीन भएर सडकमा निस्कन बाध्य नेपालीलाई भारतीय पक्षले क्वारेन्टाइनमा राख्नुको साटो नेपाल पस्न दबाब दिइरहेको छ । जसका कारण अहिले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा सयौं नेपाली अलपत्र छन् । जो खुला आकाशमुनि भोकप्यास बस्न बाध्य छन् । उनीहरू घामपानीको अलावा लामखुट्टे र किराको टोकाइको जोखिममा त्यत्तिकै छन् ।
केही रातिको समयमा नेपाल छिरिरहेका छन् । त्यसरी आउनेहरू धेरैजसो गुपचुपै आफ्नो घर पुगेका छन् । स्थानीयको नजरमा परेका केहीलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइए पनि तिनको परीक्षण हुन सकेको छैन, जसले कोरोना संक्रमितको जोखिम बढाइरहेको छ ।
सीमामा हजारौं अलपत्र
आइतबार बिहान पनि मुडिला र करौता नाकाबाट १६ जना नेपाल पसेका थिए । दिल्ली र मुम्बईबाट फर्केका उनीहरूलाई चार दिनदेखि नेपालका सुरक्षाकर्मीले दसगजामा रोक्दै फर्काइदिने गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीले त्यसरी आउनेलाई नौतनवाको क्वारेन्टाइनमा राखिदिनु भनेर एसएसबीको जिम्मा लगाइदिन्छ । तर भारतीय पक्षले भने कोरोना संक्रमण फैलिरहेको सहरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा नराख्ने भन्दै पुनः अर्को नाकामा लगेर छाडिदिने गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्माले सीमामा अहिले पनि करिब १ सय जना नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् । रोजगारीका लागि भारत गएका उनीहरूलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले नेपाल आउनमा रोकिरहेका छन् ।
संक्रमित बढ्ने आधार प्रसस्तै
सामग्री अभाव भएपछि कोरोनाको स्वाब नमूना संकलन र परीक्षण प्रभावित बनेको प्रदेश ५ मा शनिबारदेखि परीक्षण गति तीव्र पारिएको छ । केन्द्रबाट सामग्री आएपछि परीक्षणलााई तीव्र पारिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
अहिले स्वास्थ्यको जनशक्ति कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइनलाई केन्द्रित गरी नमूना परीक्षण गरिरहेको स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले जानकारी दिए।
यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउँदा र क्वारेन्टाइन रहेका व्यक्तिको स्वाबको नमूना लिँदै गर्दा प्रदेश ५ मा संक्रमितको संख्या बढेर गएको छ । गएको तीन दिनभित्रमा भारतबाट नेपाल भित्रिएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या अत्यधिक छ ।
ती व्यक्तिहरूको दुई साताअवधि नपुगेको हुँदा स्वाबको नमूना लिइसकेको अवस्था छैन । अर्कोतिर अझै पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाल आउनका लागि केही दिनदेखि अलपत्र नेपालीको संख्या पनि करिब तीन हजारभन्दा बढी भएको बताइन्छ । कपिलवस्तुको स्थानीय प्रशासनले १९ बढी नेपाली सीमामा मानिसहरू अलपत्र रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल–भारत सीमा जोएिका गाउँहरू, किनबेच हुने स्थानहरू, ओहोर–दोहोर गर्ने व्यक्ति, सुरक्षा र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी अझै पनि कोरोना परीक्षणको दायरामा आएका छैनन् ।
यो अवस्थामा शंकास्पद व्यक्ति र क्वारेन्टाइनमा रहेका सबै व्यक्तिको स्वाब परीक्षण गर्दाको अवस्थामा संक्रमित संख्या बढ्ने धेरैको अनुमान छ ।